Sheeko aqriska ku macaan oo aan caadi aheen kkkkk - iftineducation.com
Sheeko aqriska ku macaan oo aan caadi aheen kkkkk
iftineducation.com – Jimcaale Vs Jaamac
JAAMAC:- Jimcaaloow jaranjaro iyo burris mahaysaa?.
JIMCAALE:-maxaad karabtaa jaranjarada ma guri ayaad silig ku xiri rabtaa!.
JAAMAC:-ma maqal miyaa in wakhtigii loo qabtay in Boorarka dhamaantood Afsoomaali lagu qoro dhamaaday oo la la’yahay. Shaqaale loo diro.
JIMCAALE:-Boorarka bis miyaan Soomaali kanahay aaway Shilin soomaaligii, boorarkana maa Afsoomaaliga lagu wada qoro Boorka Dekadda iyo Kan Ariboorka. War ninyohow laab la kaca halaga daayo howlaha Qaran, Dowlad Canshuurteedu Doolar tahay oo Deegaankeedu Hoteel iyo qarax yahay oo shaqaaleheedu Qabiil yahay Afsoomaali u hiillin maysee yan ladaalin.
JAAMAC:-Waa tahaye iiga warran shirkii wada tashiga ee xammar ku dhammaaday .
JIMCAALE :-Markii geel loo heeso ayaad Goronyo u heestaa war meeshaan shirkama dhicin waxaa lasoo qooshay qorshe aan sax ahayn oo reer damac iyo reer jaga doon isku jallaafeynaayaan midna ma guuleysan.
JAAMAC:-waa fahmay in la dagaalamay qeylada garoowe ayaan ka daremay.
JIMCAALE:-waxaa layiri intii aan Riix qabe qaylin ayaa Raaxa qabe qayliyaa
3Malyan oo Muqdisho kunool ayaa aamusan wax lasiiyayna malaha 10kun oo Qardho degan iyo Somaliland oo aan jooginna xubno dheeri ah ayaa loogu daray waa wax ula jeeddo.
JAAMAC:-Horta labada Aqal maxay ahaayeen Mamareykan aan nahay Hal Baarlabaan oo Buuq badan oo beeso jecel ayaan qaati ka taagannahay ee Aqlka kale hanalaka daayo.
JIMCAALE:- labada Aqal Qabiilka Caalamka ayaa wata ee iska fiiri yaan…
C/laahi M. Cumar (Mucjis)
Xafiis wareedka Dulqaadka.com (Dulqaadka Media)
COD:RW Cumar oo Gaas Xasuusiyay Arin oo Hilmaamsanaa oo Darood u Arkaan….
Halkan Ka bar 9 Faa’ido uu leeyahay Canbaha Iyo awooda Galmada Oo uu Kordhiyo